बुढेसकालमा लाइसेन्स नवीकरणको रहर – Chitwan Post
बुढेसकालमा लाइसेन्स नवीकरणको रहर
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १८, २०७६
मसँग ए, बी, सी, डी समूहको सवारी चालक अनुमति पत्र छ । (ए) ले मोटरसाइकल, (बी) ले कार, जीप, (सी) ले टेम्पो र (डी) ले पावर टिलर चलाउने अनुमति प्रदान गर्दोरहेछ । मेरो उमेर ७० नाघिसक्यो । आजभोलि म मेरो निजी स्कुटरमात्र सुस्त चलाउँछु ।
एकमनले यो ७० को वयमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण नगरौँ कि जस्तो लाग्यो, तर अर्को मनले कसै गरी दुर्घटनामा परे आवश्यकता पर्छ भन्ने सोच आयो र नवीकरण गर्ने नै निधो गरेँ । यसका लागि केही आफन्तहरुसँग सल्लाह गर्दा संघीय सरकारको बहालीपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्न ललितपुरको एकान्त कुनामै जानुपर्दैन, काठमाडौँमा आजभोलि ठाउँठाउँमा यसको सुविधा छ भन्ने सूचना पाएँ । स्मरण रहोस्, मेरो सवारी चालक अनुमति पत्र २०३८ सालमा बाग्मती अञ्चलमा बनेको हो र अन्तिम नवीकरण एक जना दलालमार्पmत २०७० सालमा एकान्त कुनाबाटै भएको थियो ।
काठमाडौँ हिँड्नै लागेको बेलामा मेरो कान्छा छोरा विपीनले मकवानपुर, हेटौँडामा पनि नवीकरण गर्न सकिन्छ रे भन्दै थियो, तर काठमाडौँ जाने निधो गरी सतनचुली बस सेवाको टिकटसमेत काटिसकेको हुनाले गत असार १ गते आइतबार बसबाट म काठमाडौँ लागेँ । नारायणगढबाट बिहान ७ बजे छुटेको बसले बिहान ११ः४५ मै काठमाडौँको कलंकी छोडिदियो । स्थानीय बस चढेर स्वयम्भूको ठूलो भ¥याङ ओर्लिएँ । त्यहीँ नजिकैको यातायात कार्यालयमा छिरेँ । मान्छेको भीड ठिकै थियो । नवीकरणका लागि नागरिकता र अनुमति पत्रको फोटोकपी र त्यसमा १० रूपैयाँको टिकट टाँस्नुपर्ने रहेछ । १० को टिकटलाई १५ रूपैयाँ तिरेर किनेँ । लाइनमा केहीबेर कुरेपछि मेरो काम सुरू भयो । मेरो लाइसेन्सको विवरण कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर निकालेपछि कम्प्युटरवाली नानीले “तपाईंको लाइसेन्समा (सी) समूह काटेको छ तर विवरणमा काटिएको छैन, त्यसै हुनाले तपाईं एकान्तकुनामै जानुपर्छ, यहाँबाट काट्न मिल्दैन” भनिन् । मैले धेरै अनुनय–विनय गरेँ, तर ठूलो भ¥याङ यातायातका कर्मचारी मान्दै मानेनन् र म बाध्य भएर त्यही दिन ललितपुरको एकान्तकुना पुगेँ ।
असारको मध्य घाममा काठमाडौँ पनि तात्तिएकै थियो । त्यसपछि यातायात कार्यालयमा भएको मानिसको भीडले वातावरण उकुसमुकुस थियो । यतिबेला घडीमा १ः३० बज्दै थियो । लाइसेन्स नवीकरणका लागि ७, ८, ९, १० र ११ को कम्प्युटर टेबलमध्ये मैले ७ मै बस्ने मौका पाएँ । कम्प्युटरबाट नानीले मेरो रोग पत्ता लगाइन् र मलाई अर्को भवनको २ नम्बर कोठाको हाकिमले मात्र तपाईंको (सी) समूह डिलेट गर्न सक्छ, तपाईं त्यहीँ जानुस् भनेर पठाइन् । म सकी–नसकी अर्को भवनको माथिल्लो तलामा भएको २ नम्बरको कोठामा पसेँ । भट्टराई थरका हाकिम रहेछन् । उनले पुनः मलाई १८ र १९ नम्बरको कोठामा गएर मेरो लाइसेन्सको समूह अभिलेख उतार गरेर ल्याउनू भनेर आदेश दिए । म उतै लागेँ । १८ नम्बरको कोठामा ताला लागेको थियो । १९ नम्बरको कोठामा ३ जना कर्मचारी चिया पिउँदै थिए । मैले आप्mनो समस्याबारे बेलीविस्तार गरेँ । आधा घन्टा कुरेँ । हाकिमहरुको चियापानपछि मात्र थोरै नरम खाले एक जनाले मलाई अर्को कोठामा लगेर मेरो लाइसेन्सको समूह अभिलेख उतार गरी लेखिदिए । म पुनः २ नम्बरको कोठामा फर्किएँ । त्यहाँ हाकिम थिएनन् । अन्य केही व्यक्तिहरु निरास भएर कुर्दै थिए ।
केही समयपछि हाकिम (भट्टराई) देखा परे । मैले आप्mनो कागजहरु देखाएँ । उनले “तपाईंको काम तीन बजेपछि हुन्छ, कम्प्युटर चलाउन जान्ने मान्छेलाई ३ बजे डाकेको छु, उसले नै तपाईंको (सी) समूह डिलेट गर्छ, त्यतिबेलासम्म बाहिर कतै जानुस् र ३ बजेपछि आउनुस्” भनेर आदेश दिए । मैले त्यतिखेर २०७० सालमा मेरो लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने दलाल भाइलाई भेट्ने सोच गरेँ । फोनमा उनी भेट भए र नजिकै रहेको उनको कार्यालयमा म पसेँ । उनलाई मेरो समस्या पोखेँ । उनले मलाई लटरपटर जवाफ दिएर त्यहाँबाट फर्काए । म पुनः ३ बजे भट्टराई हाकिम साहेबको २ नम्बर कोठामा पुगेँ । ३ः३० बजेतिर एउटा भाइ आइपुगेर मेरो लाइसेन्सको (सी) समूह उनले डिलेट गरिदिए । त्यसपछि हाकिमले मलाई पुनः अर्को भवनको ७ देखि ११ नं को टेबलमा फोटो खिच्न र औँठाछाप लगाउन पठाए । म त्यहाँ पुग्दा १० नम्बरको टेबलमा बाहेक अरु कुनै टेबुलमा कर्मचारी थिएनन् । १० नम्बरको टेबुलमा एक जना नेवार नानी कनीकुथी काम गर्दै थिइन् । मैले उनीसित नजिकिन मेरो टुटेफुटेको नेवारी भाषामा उनलाई मेरो कामका बारेमा अनुरोध गरेँ । उनले अमिलो मुख गर्दै मेरो फोटो खिच्ने र औँठाहरुको छाप लिने काम गरिन् र मलाई आँखाको मेडिकल टेस्ट गर्ने अर्को कोठामा भएको टेबलहरुतिर लगिन् । सबै टेबलहरु खाली थिए । त्यसै हुनाले उनले मलाई अर्को भवनको ५ नम्बरको कोठामा गएर आँखा जाँच (मेडिकल टेस्ट) गर्नू भन्ने आदेश दिइन् । त्यतिबेला ३ः४५ बजिसकेको थियो र मेडिकल टेस्ट गर्ने कोठा नं ५ को ढोका बन्द भैसकेको रहेछ । च्यानल गेटमा एउटा प्रहरी भाइ थियो । उनीसँग अनुनय–विनय गरेर आपूm ज्येष्ठ नागरिक भएको कारणले भित्र जान सफल भएँ ।
भित्र अँध्यारो कोठामा मेडिकल टेस्ट हुँदै रहेछ । मलाई भित्र पस्न मुस्किल भयो । त्यहाँ पनि आपूm ज्येष्ठ नागरिक भएको कारण देखाई अनुनय–विनय गरी भित्र छिरेँ । एउटी महिलाले मेरो आँखाको परीक्षण गरिन् र १ नम्बर भवनको गेटमा गएर रू. ३८ को टिकट काटेर आउनू भनी आदेश गरिन् । १ नम्बर भवनको गेटको टिकट घर पत्ता लगाउन मलाई हम्मेहम्मे भयो । बल्लतल्ल रू. ३८ को टिकट काटेर ल्याएँ । पुनः ५ नम्बर कोठामा गएँ । रू. ३८ को टिकट उनले लिएपछि मलाई अर्को भवनको कोठा नम्बर १३ र १४ मा जानू भनी पठाइन् ।
आदेश शिरोपर गर्दै म त्यतै लागेँ । ४ बजिसकेको हुनाले १३ र १४ नम्बर कोठाका झ्यालहरु बन्द भैसकेका रहेछन् । नम्बर १३ मा आप्mनो कागजहरु देखाएपछि उसले स्वीकृति प्रदान गर्दोरहेछ र त्यसपछि १४ नम्बरले राजस्व बुझ्दोरहेछ । त्यतिबेला एउटा यातायातको कर्मचारीलाई फेला पारेँ । उनले मलाई “अब तपाईं भोलि आएर १३ नम्बर कोठाबाट अप्रुभ गराउनुस् र १४ नम्बरमा राजस्व तिर्नू” भनी सिकाए ।
दिनभरिको हैरानीले म थाकिसकेको थिएँ । एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयबाट बाहिर निस्किएँ । एउटा स्थानीय बसमा चढेर म राधेश्याम भाइको घर सोह्रखुट्टेको फलपूmल चोक फर्किएँ ।
भोलिपल्ट असार २ गते बिहानै १०ः१५ मै एकान्तकुना, ललितपुरको यातायात कार्यालय पुगेँ । कोठा नम्बर १३ र १४ का झ्यालहरु बन्द थिए । म पछि अन्य व्यक्तिहरु पनि लाइनमा थपिए । कुर्दा कुर्दा बल्ल १०ः४५ मा ती कोठाका झ्यालका प्वालहरु खुल्न थाले । म सुरूमै उभिएको थिएँ । १३ नम्बर कोठाको हाकिमले मेरा कागजहरु अवलोकन गरेर कम्प्युटर चलाएपछि १४ नम्बरमा जानुस् भनी आदेश गरे । मैले त्यसै गरेँ । कोठा नम्बर १४ मा १० मिनेटजति कुरेपछि बल्ल राजस्व तिर्न सफल भएँ ।
“अब लाइसेन्स लिन कहिले आउने सर ?” मैले प्रश्न गरेँ । “६/७ महिनापछि आउनुस् न ।” हाकिमले जवाफ फर्र्काए ।
राजस्व तिरेको रसिद हातमा पर्दा एउटा सानोतिनो युद्ध जितेको महसुस गर्दै सन्तोषको सास फेर्दै म यातायात कार्यालयबाट बाहिर निस्केँ ।